Ixesha kunye nabahlobo 59
Ziyintoni na ukuba iingxaki eziye zahlula zonke iinzame kwaye zibonakala zingenakwenzeka isisombululo ngexesha lokuvuswa kufuneka zixazululwe ngexesha lokulala okanye ngokukhawuleza ekuvukeni?
Ukusombulula ingxaki, amagumbi engqondo obuchopho kufuneka engafakwanga. Xa kukho ukuphazamiseka okanye izithintelo kumagumbi engqondo, inkqubo yokusombulula nayiphi na ingxaki ethathiweyo iyathintelwa okanye iyekwe. Ngokukhawuleza xa ukuphazamiseka kunye nezithintelo zinyamalala, ingxaki iyasonjululwa.
Ingqondo nengqondo zizinto ekusetyenzisweni kwengxaki, kwaye umsebenzi yinkqubo yengqondo. Ingxaki inokuxhalaba sisiphumo somzimba, njengoko ziziphi izixhobo ezinokusetyenziswa kwaye yeyiphi indlela yolwakhiwo ekufuneka ilandelwe ekwakheni ibhulorho ukuze ibe nobunzima obuncinci kunye namandla amakhulu; okanye ingxaki inokuba ingumbandela ongafikelelekiyo, onjengokuthi, wahlulwa njani kwengqondo kwaye unxulumene njani nolwazi?
Ingxaki yomzimba yenziwa ngengqondo; kodwa ekuqwalaseleni ubungakanani, umbala, ubunzima, iimvakalelo zibizwa ngokuba zidlalwe kwaye zincede ingqondo ekusombululeni ingxaki. Isisombululo sengxaki okanye inxenye yengxaki engeyiyo eyokwasemzimbeni yinkqubo yengqondo apho iimvakalelo zingakhathalelwanga kwaye apho isenzo seengqondo siya kuphazamisana okanye sithintele ingqondo ekusombululeni ingxaki. Ingqondo yindawo yokuhlangana kwengqondo kunye neengqondo, kwaye kwiingxaki eziphathelene nomzimba okanye iziphumo ezivuselelayo ingqondo kunye neemvakalelo zisebenza kunye ngengqondo. Kodwa xa ingqondo isebenza emsebenzini kwiingxaki zezifundo ezingafunekiyo, izivamvo azikhathalelanga; nangona kunjalo, izinto zelizwe langaphandle zibonakaliswa ngeemvakalelo zingene kumagumbi engqondo kwaye kuphazamise okanye kuthintele ingqondo emsebenzini wayo. Ngokukhawuleza xa ingqondo inokuzisa amandla ayo ukuba ithwale ngokwaneleyo kwingxaki ethathelwa ingqalelo, ukuphazamiseka kwangaphandle okanye iingcinga ezingakhathalelwanga zikhutshelwe ngaphandle kwigumbi lengqondo, kwaye isisombululo kwingxaki sivele kwangoko.
Ngamaxesha okuvuka iimvakalelo zivulekile, kunye nokujonga okungafanelekanga kunye nesandi kunye nokuvela kwangaphandle kwehlabathi kungxama ngokungagungqiyo kumagumbi okucinga kwingqondo kuphazamisana nomsebenzi wengqondo. Xa iimvakalelo zivaliwe kwihlabathi langaphandle, njengoko kunjalo ngexesha lokulala, ingqondo iyathintelwa emsebenzini wayo. Kodwa ke ukulala kuvame ukunqamla ingqondo kusuka ezingqondweni kwaye ngokufuthi kuthintela ingqondo ekubuyiseleni ulwazi lwento eyenzileyo ngelixa lingaphandle kokunxibelelana neemvakalelo. Xa ingqondo ingavumeli ngxaki, loo ngxaki ithathwe kunye nayo ukuba ishiya iimvakalelo ngexesha lokulala, kwaye isisombululo sayo siyabuyiswa kwaye sinxulumene neemvakalelo xa uvuka.
Oko umntu oleleyo uye wayicombulula ingxaki angakwaziyo ukuyicombulula kwimeko yokuvuka kuthetha ukuba ingqondo yakhe yenziwe bubuthongo obungakwaziyo ukuyenza ngelixa ivukile. Ukuba uphupha impendulo, inqaku eliya kuba, malunga nezinto ezivuselelayo. Kwimeko apho, ingqondo, yokungavumeli ingxaki, iqhubeke kwiphupha inkqubo yokucinga eyayikade ibandakanyekile ngelixa ivukile; Inkqubo yokuqiqa yayikhutshelwa kuphela kwiimvakalelo ezingaphandle zokuphaphama ziye kwiimvakalelo zangaphakathi zokuphupha. Ukuba umxholo awukhathalelwanga kwizinto ezinobuchule, impendulo ayizukuphupha, nangona silele impendulo isenokuza kwangoko. Nangona kunjalo, akuqhelekanga ukuba iimpendulo kwiingxaki ziphuphe okanye zifike xa ulele.
Iimpendulo kwiingxaki zinokubonakala ngathi ziza ngexesha lokulala, kodwa iimpendulo zihlala ziza ngelixa lomzuzu ingqondo iphinda idibane neemvakalelo zokuvuka, okanye kwangoko emva kokuvuka. Iimpendulo kwiingxaki zemeko engafunekiyo azinakuphupha, kuba izinzwa zisetyenziswa ephupheni kunye neemvakalelo ziya kuphazamisana okanye zithintele ukucinga okungafunekiyo. Ukuba ingqondo xa ilele kwaye ingaphuphi isombulula ingxaki, kwaye impendulo yaziwa xa indoda iphaphile, ke ingqondo ibonakala ivuka ngokukhawuleza nje ukuba impendulo ibe ifikile kuyo.
Ingqondo ayiphumli ekulaleni, nangona kungekho phupha okanye isikhumbuzo somsebenzi wengqondo. Kodwa imisebenzi yengqondo xa ulele, kwaye ngelixa ungaphuphi, ayinakwenziwa yaziwe kwimeko yokuvuka, kuba akukho bhulorho yakhiwe phakathi kwamazwe kwingqondo kunye nemimandla yokuvuka okanye imvakalelo yokuphupha; Ukanti omnye unokufumana iziphumo zale misebenzi ngohlobo lwenkuthazo yokwenza inyathelo kwisimo sokuvuka. Ibhulorho yokwexeshana phakathi kwamazwe enengqondo nawokuvuselela imeko yenziwa ngulowo ubambe ubuthongo ngokuqinileyo ingxaki leyo ingqondo yakhe yayijolise kuyo ngelixa iphaphile. Ukuba usebenzise ingqondo yakhe ngokwaneleyo kwimizamo yakhe yokujonga isisombululo sengxaki ngelixa ephaphile, imizamo yakhe iyaqhubeka nokulala, ubuthongo butsalwa kwaye uya kuvuka kwaye aqonde isisombululo, ukuba ebefikelele kuso xa ulele.